အလေးချိန်စက် ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ပရင်တာ | တံဆိပ်စက် - HANYI
Visual And Code Reading စစ်ဆေးရေးစနစ်
Code ကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အတုနှင့် Anti-channeling စနစ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အချိန်နှင့်တပြေးညီအွန်လိုင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်
မြန်နှုန်းမြင့် Rotary Round ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်
မြင့်မားသော Precision Top Surface Labeling Machine
ဒေါင်လိုက် Round ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဘေးထွက်တံဆိပ်ကပ်စက်ရှေ့နှင့်နောက်ကျော
အလေးချိန်သတင်းအချက်အလက်သည်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထုပ်ပိုးမှု၏အရေးကြီးသောဂုဏ်သတ္တိများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အလေးချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ Hanyi အလေးချိန်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်သည်အလိုအလျောက်သယ်ဆောင်ရန်နှင့်ငြင်းပယ်ရန်ယူနစ်များ၊ အွန်လိုင်းအလေးချိန်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်အနာဂတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလေးချိန်စက် ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ပရင်တာ| တံဆိပ်စက်အွန်လိုင်းအလေးချိန်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်
Weight information is one of the important attributes of product packaging and logistics packaging, so weight measurement and review are usually essential operations. Hanyi weighing, printing and labeling machine integrates automatic conveying and rejecting unit, အွန်လိုင်းအလေးချိန်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက် and packaging data background processing software. It isadigital packaging tool for future manufacturing.
၎င်းတွင် staticbelt စကေး (သို့) roller စကေး (အလေးချိန်0~ 100kg, အလေးချိန်တိကျမှန်ကန်မှု± 1/1000), Weixun ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်၊ fixedbar code scanner နှင့်စက်မှုကွန်ပျူတာတို့ပါဝင်သည်။
တစ်နာရီလျှင်အကြိမ် ၃၀၀၀ နှုန်းဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊
ပုံနှိပ်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှု 300dpi ။
တည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုကို± 0.5mm ။
တိကျမှန်ကန်မှုကို 1mm ±တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။
၎င်းသည် PCB Surface Mount System သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်မျိုးစုံသောထိပ်တန်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောတံဆိပ်ကပ်ထောင့်မှနေရာချထားနိုင်သည့်တံဆိပ်ကပ်ပန်းကန် isoptional, လှည့်။
တံဆိပ်ကျဆင်းမှုထောက်လှမ်း sensorand တံဆိပ်ကပ်ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ optional ကိုဖြစ်ကြသည်။
ပုံနှိပ်ခြင်းထိန်းချုပ်မှု software ကို
ပုံနှိပ်ခြင်းထိန်းချုပ်မှု software ကို system can configure the labeling process data such as product, bar code, label and location, automatically control and record the operation of the printing labeling machine; edit the bar code label format and data source.
SHOPFLOW, MES, ERP or PLM ကဲ့သို့သောအချိန်နှင့်အမျှဆက်သွယ်မှုရှိသောစနစ်များ။
ပုံနှိပ်ခြင်း mode ကို
ပုံနှိပ် resolution ကို
တစ် ဦး က \_ B တန်း
4 လက်မ /6လက်မ
ဖယောင်းအခြေစိုက်စခန်း, ရောနှောအခြေစိုက်စခန်း, ဗဓေလသစ်အခြေစိုက်စခန်း
တစ်စက္ကန့်လျှင် 12 လက်မ
serial port, USB နှင့် Ethernet ကဲ့သို့သောပုံမှန် interface များ
PLC သည် RS232၊ စကင်နာသည် RS232 ဖြစ်သည်
ပုံးပုံးဘက် / ထိပ်မျက်နှာပြင် / အောက်ခြေမျက်နှာပြင် / ထောင့်မျက်နှာပြင်
â ons 0003000 ပုံး / နာရီ
AC220V ±10ï¼ ... 50HZï¼Œ1kw
0.5-0.6MPA စီးဆင်းမှုနှုန်းမှာ 90L / min ထက်မနည်းပါ
အွန်လိုင်းအလေးချိန်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက် has been widely used in different fields.
1. Whats the lead time/manufacturing period for the အွန်လိုင်းအလေးချိန်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်？
4. သင်၏ MOQ ကဘာလဲ?
T / T ။
၂၄ နာရီ၊ အချိန်မီတုံ့ပြန်မှု။
8. OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါက?
Sure.We သည်မတူညီသောတောင်းဆိုမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ မတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။
10. သင့်တွင်အသေးစိတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်သော installationmanual ရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသေးစိတ်လက်စွဲရှိသည်၊ သင့်အတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုကြိုတင်သတ်မှတ်မည်
hot Tags:: အွန်လိုင်းအလေးချိန်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အဆင့်မြင့်, စျေးစာရင်း, အရည်အသွေးမြင့်မား
လိပ်စာ: ပထမအကြိမ်အဆောက်အအုံအမှတ် (၈၉) အရှေ့ဟူးဂန်းလမ်း၊ Minhang ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းစနစ်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီအွန်လိုင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာစက်၊ အလိုအလျောက်အသိဉာဏ်ရှိသည့်တံဆိပ်စက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအတွက်။ သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်း၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ချန်လှပ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shanghai Hanyi Engineering Equipment Co. , Ltd အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်